ဒီဘလော့လေးသည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရား၏ အရိပ်အောက်တွင်ရှိသောကြောင့် ရောက်လာသူအပေါင်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်မာ ရွှင်လန်း ကြပါစေ။********************<>*<>....................ဆရာကြီးတစ်ယောက် မဟုတ်သိအတွက် အမှားပါလျှင် လည်းနားလည်ပေးကြပါ လိုအပ်တာရှိရင် ပြောပေးကြပါ အကြံဥာဏ်လေးပေးကြပါ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘလော့တွင်ကျွန်တော်နှင့်အတူနည်းပညာများကိုမျှဝေချင်တယ်ဆိုရင် maungruper@gmail.com ကို mail ပို့ပြီးဝင်ရောက်မျှဝေလို့ရပါတယ်။ နည်းပညာ ညီကိုမောင်နှမ များကိုလည်း နွေးထွေးစွာကြိုဆိုလျှက်ပါ။
ios 7.1.1 အတွက် Jailbreak နှင့် မြန်မာ ဖောင့် ကီးဘုတ် သွင်းနည်း
MMITShare iOS နှင့်ဆိုင်သော No comments
iOS 7.1 နဲ့ iOS 7.1.1 ကို Pangu ဆိုတဲ့ App လေးနဲ့ Jailbreak ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ….
Jailbreak လုပ်နိုင်မဲ့ iOS Device တွေကတော့…
jailbreak ပြုလုပ်လို့မရနိုင်တဲ့ ios Device တွေကတော့
Forth generation iPad (iPad 4)
Pangu ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါအဆင့်အတိုင်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
၁။ Pangu ကိုဒီမှာ Download လုပ်ပါ။
၂။ iTunes Latest Version သွင်းထားပါ။ Backup လုပ်ထားပါ။
၃။ USB ကိုအသုံးပြုပြီး Computer နဲ့ချိတ်ဆက်ကာ jailbreak လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
၄။ Software ကို windows ပေါ်မှာဖွင့်ပါ။ iOS Device မှ Date ကို ၆ ရက် ၂ လ ၂၀၁၄ သို့ပြောင်းပါ။
၅။ အမဲရောင် ခလုပ်လေးကိုနှိပ်ပါ။
၆။ တစ်ဝက်လောက်မှာရပ်သွားရင် ဖုန်းကို unlock လုပ်ပြီး pangu ပုံလေးကိုနှိပ်ပါ။ continue နှိပ်ပါ။ restart ကျတာစောင့်ပါ။
၇။ jailbreak လုပ်ပြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာဖောင့် နှင့် ကီးဘုတ်သွင်း နည်း
မြန်မာဖောင့်နှင့်ကီးဘုတ်သွင်းရန် ကျွန်တော် Repo ကို Add ပေးပါ
Add ပြီးလျှင် Komin27 Source ထည်းကိုဝင်ပါZawgyi iOS7Font ကိုရှာပြီး install ပါ
Keyboard အတွက် ttKeyboard for iOS7 ကို install ပေးပါ ခင်ဗျ
Restart ကျပီးပြန်တက်လာတာနဲ့ မြန်မာကီးဘုတ်လဲအဆင်ပြေတာတွေ့ရမှာပါ….
အဲဆို Jailbreak နဲ့ မြန်မာစာသွင်းတာပြီးဆုံးပါပြီ အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ။
ကျွန်တော်ကိုတိုင် iphone 4s လေးနဲ့သေချာစမ်းပြီးတော့မှတင်ပေးလိုက်တာပါ…အခုပိုစ်လေးကို PDF ဖိုင်လေးအဖြစ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ ဒေါင်းပါ....
ရေးသားသူ = Htet Lin Aung
Than Toe Aung blog နည်းပညာ3comments
မိုးညိုသား iOS နှင့်ဆိုင်သော No comments
Than Toe Aung Android Games No comments
Samsung Galaxy Duos GT-19082L မှာ root သွင်းပြီး myanmar font နဲ့ keyboard သွင်းနည်း
MMITShare Android Root, Android ဖုန်းမြန်မာ Font / Keyboard No comments
Samsung Galaxy Duos GT-19082L ဖုန်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.... အရမ်းကိုလွယ်ကူတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်.. လုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုလဲအောက်မှာအပုံနှင့်တကွသေချာရှင်းပြထားပါတယ်...
Contract Killer2ကို Credit တွေအများကြီး ဟက်ယူကြမယ်
မင်္ဂလာပါ Contract Killer2ကိုကစားနေတဲ့ ios သမားတွေအတွက် Credit တွေခိုးတဲ့နည်းလမ်းလေးရေးပေးချင်ပါတယ် .. နဲနဲတော့ လက်ဝင်ပါတယ်.. JB လုပ်မထားတဲ့ သူတွေလည်း ခိုးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးဆိုတော့ သဘောကျလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်.. ၁၀၀% အဆင်ပြေကြောင်း အာမခံပါတယ် .. ကဲစလိုက်ကြရအောင်...
မစခင် .. လိုအပ်တာတွေကို ( Zippyshare :: MiloShare ::: TusFiles ) ဒေါင်းလိုက်ပါ..
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဒေါင်းထားတဲ့ဖိုင်ကိုဖြေပြီးတော့ အထဲက ContractKiller2 XML ဖိုင်ကို Desktop ပေါ်ကိုတင်ထားပါ.
နောက်ပြီးတော့ Charles Pro ကို ကွန်ပျူတာမှ install လုပ်ပါ.
Devices ထဲက Safari ကနေပြီးတော့ www.charlesproxy.com/charles.crt/ ကိုရိုက်ပြီးတော့ Charles Proxy ကို install လုပ်ထားပါ။
ပြီးရင် ကွန်ပျူတာမှာ Charles ကိုဖွင့်ပါ.. ပွင့်လာပြီဆိုရင် Proxy ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
ပြီးသွားရင်တော့ Proxy Settings ကိုဝင်လိုက်ပါ ။
Setting ကိုရောက်သွားတာနဲ့ Port မှာ 8888 ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
ပြီးသွားရင် SSL ကိုနှိပ်ပါ... Enable SSL Proxying ကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ..
ပြီးရင် Add ကိုနှိပ်လိုက်ပါ.. ပေါ်လာတဲ့ ဇယားပေါ်က Host ;; မှာ ကြယ်ပွင့် ( * ) ကိုနှိပ်ထည့်လိုက်ပါ.. Port မှာကတော့ 8888 ကိုရိုက်လိုက်ပါ ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်ပါ..
ပြီးရင် Tools ကိုနှိပ်ပါ ကျလာတဲ့အထဲမှ Rewrite ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ..ဘောက်တစ်ခုကျလာပါလိမ့်မယ် ကျလာတဲ့ ဘောက်မှာ Enable Rewrite ကိုအမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် အောက်က Import ကိုနှိပ်ပြီးတော့ စောစောက Desktop ပေါ်တင်ခိုင်းထားတဲ့ Contract Killer2XML ဖိုင်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါဗျာ.
နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ Help ကိုနှိပ်ပါ .. ကျလာတဲ့အထဲကမှ Local IP Adress ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ထွက်လာတဲ့ IP ကို သေချာမှတ်ထားလိုက်ပါ..
ဒီအဆင့်ကတော့ မိမိရဲ့ devices မှာလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် .. Wifi Connection ရှိနေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ.. ရှိနေပြီဆိုရင် Setting ကိုဝင်လိုက်ပါ.. မိမိချိတ်ထားတဲ့ wifi နည်မည်ရဲ့ ဘေးနားက (i) လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် HTTP PROXY အောက်က Manual ကိုနှိပ်ပါ ပြီးရင် အောက်မှာ .. Server ဆိုတဲ့နေရာမှာ စောစောက မှတ်လာခဲ့တဲ့ Local ip ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ.. Port မှာတော့ 8888 လို့ပဲပေးလိုက်ပါ.. Proxy ထည့်လို့ပြီးရင် ပြန်ထွက်လိုက်ပါ .. Safari ကနေ Proxy အလုပ်လုပ်မလုပ်ကို Google လို့ရိုက်ပြီးတော့ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ တက်လာပြီဆိုရင်တော့ အလုပ်လုပ်ပါတယ် ကဲဒါဆိုရင်တော့ Hack လုပ်လို့ရပါပြီ..
ကဲ Drive မှာရှိတဲ့ Contract Killer ကိုဖွင့်လိုက်ပါ.. ပြီးရင် Store ကိုဝင်လိုက်ပါ
တွေ့ပြီဆိုရင်.. Free ဆိုပြီးတော့ အောက်ဆုံးက Credit ပုံလေးနဲ့ဟာကို နှိပ်လိုက်ပါ..
အပေါ်မှာ WatchaVideo For 9999999 Free ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်.. နှိပ်လိုက်ပါ.. Clash of Clans ထွက်လာပါလိမ့်မယ် .. ပြီးတဲ့ကြည့်ပေးလိုက်ပါ ပြီးသွားရင် X နှိပ်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါ အောက်ပါပုံ အတိုင်း 9999999 Credit ရရှိပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလာပါလိမ့်မယ်ဗျာ ဘယ်တော့မှမကုန်တော့ပါဘူးဗျာ အမုန်းသာဝယ်ပြစ်လိုက်တော့ ကုန်ရင်လည်း စောစောကလို Short Movie ကြော်ငြာလေးကြည့်ပေးလိုက်ရင် ရလာပါလိမ့်မယ်
ကဲအားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ.. အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ နားလည်အောင်လို့ ကြိုးစားပြီးတော့ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်.. အဆင်မပြေတာ တစ်ခုခုရှိခဲ့ရင် Comment ဖြစ်ဖြစ် C Box ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောခဲ့ပါ..
စာကြွင်း၊၊၊၊၊၊ ။။ Windows System 32bit သမားများအတွက် .. Charles ကို ဒီနေရာမှာ ဝင်ယူလိုက်ပါ...
License ဗားရှင်းမဟုတ်သည့်အတွက် မိနစ် ၃၀ သာဖွင့်လို့ရပါသည် ပြည့်သွားရင် ပိတ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်.. ပိတ်ပြီးရင် ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ ...ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်..
Vidstitch Pro – Video Collage 1.4
MMITShare Android Application No comments
အသစ်ထွက်လာတဲ့ App လေးတစ်ခုပါ... အရင်ကထွက်တဲ့ App တွေက frame တွေထဲမှာဓါတ်ပုံတွေပဲထည့်လို့ရတယ်.. အခုက frame တွေထဲမှာ video ဖိုင်တွေပါထည့်ပြီး video ဖိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်.. ဖိုင်ဆိုဒ်ကလဲ 10.7MB ဘဲရှိပါတယ်...
သင့်ကွန်ပျူတာ ပေါ့ပါးနေအောင် လုပ်ဆောင်သင့်သည့် အချက်များ with Speed Up My PC 2014
Than Toe Aung speed up pc No comments
.Speed Up My PC 2014 ဆိုတဲ့ Softawre လေးနဲ့ လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
Window registry error များကို Fix လုပ်ခြင်း
issues များကို Optimize လုပ်ခြင်း
ကွန်ပျူတာစဖွင့်ချိန်မှာ မလိုအပ်သော Program များ ပွင့်လာခြင်းကို Disable လုပ်ခြင်း
Registry defragmentation လုပ်ဆောင်ခြင်း
စသည်အချက်တို့ကို Speed Up My PC 2014 အသုံးပြုခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
၇ရက်တကြိမ်လောက် လုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်မိမိ ကွန်ပျူတာ အရင်ကထက် ပေါ့ပါးလျှင်မြန်နေတာကို
တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် လိုအပ်ပါက အောက်မှာ Download ပါ Full version ဖြစ်ဖို့ Lincense ကီးပါ
Download အဆင်ပြေရင်အောက်ပါကြော်ငြာကိုတစ်ချက်ကလစ်ခဲ့ပါ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
iOS သမားများအတွက် Apple ID ပြုလုပ်နည်း
မင်္ဂလာပါ ဒီတစ်ခါတော့ တဂျီဂျီတပွမ်ပွမ်နဲ့ တောင်းနေကြတဲ့ Apple ID ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်တတ်အောင် လုပ်နည်းလေးရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်.. သိပြီးသားဖြစ်သော...
အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို မြင့်စေမယ့်ဆော့ဝဲ ( For Rooted Androids Only)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖုန်းတွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အင်တာနက်လိုင်းကို အမြဲတစေ ယူသုံးနေတဲ့ Application တွေရှိနေတာကို ဖုန်းသုံးနေတဲ့ သူ...
Android Application ရေးသားတဲ့ဆော့ဝဲ
ဒီဆော့ဝဲလေးကိုတော့ သူငယ်ချင်းတော်တော်များများ ကြိုက်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် .. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီနေ့ခောတ်မှာ လူသုံးများလာတ...
မင်္ဂလာပါဗျာ ကျွန်တော်ဒီနေ.တင်ပေးချင်တာလေးကတော့ ကျွန်တော့ဆရာတစ်ယောက် စမ်းသပ်ပြီး အောင်မြင်လို. ပြန်လည်ဝေမျှတာပဲဖြစ်ပါတယ် မသိသေးသူများအတွက်သာ...
CyberLink PowerDirector 9.00.2330 with key Full Version
.. (32bit Window မှာ Video တည်းဖြတ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်) CyberLink PowerDirector 9.00.2330 with key Full Version ဗီဒီယိုတ...
How to create one click bat (for android)
အရင်ဆုံး command တွေကို ဒီမှာဖတ်လိုက်ပါ နာမူနာ အနေနဲ့ root ပြီးတဲ့ဖုန်းတွေကို mm font နဲ့ frozen keyboard ကို system app အနေနဲ့ သွင်းပေးမဲ့ ...
.. မြန်မာသတ်ပုံကျမ်း မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်းလေးပါ... အရမ်းကောင်းပါတယ်... အမြဲတမ်းစာလုံးပေါင်းမှားတတ်တဲ့ကျွန်တော့အတွက်ကေ...
.. ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဖိုင်တစ်ခုခုကို Upload တင်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်တင်ထားတဲ့ ဖိုင်လေးတွေ ရေရှည် ခံမှာလား၊ စိတ်ချရလား၊ ကိုယ် Upload ...
facebook မှာမိမိအကောင့် ကို ပြန် hack ကျမယ် (လော့ ကျသူများ ) အတွက်
facebook မှာ lock ကျနေ တဲ့ မိမိရဲ့ အကောင့် ကို မိမိဘာသာ ပြန် hack ကျမယ်ဗျာ။ လော့ ကျနေတဲ့ အကောင့် တော်တော်များများ အတွက်အသုံးဝင်မှာ...
မင်္ဂလာပါ မြန်မာပြည်လူငယ်ပရိတ်သတ်ကြီးကို ကျွန်တော် အခုတင်ပေးမဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ Connectify ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ ဒီကောင်လေးကိုဘယ် ကတော့မိမိတို....
Facebook v 11.0.0.0.22 apk
Xaiomni Devices များအတွက် Root ဖောက်နည်း
Video Editing အခြေခံ လေ့ကျင့်ခန်း
Moe Htet (နည်းပညာ)
AutoCAD 2013 Full Crack Full Version 32 bit 64 bit
Photoshop သုံးတဲ့သူငယ်ချင်တွေအတွက် Plug-in
Bluboo Maya max ကို Root လုပ်ခြင်း
မြန်မာပြည် လူငယ်များရဲ့ နည်းပညာ ဝေမျှခြင်း
Binary Forex Trading Class
ခေါင်းစဉ်ရွှေးချယ်ရန် Activator (1) Android (4) Android Application (66) Android Games (4) Android Root (9) Android ဖုန်းမြန်မာ Font / Keyboard (1) Antivirus Softwares (6) Autorun Killer (1) Avast (2) AVG (2) AVS (1) Back up (1) blog နည်းပညာ (5) browser နဲ.ပက်သက်သမျှ (3) Call Recorder (1) CCleaner (1) Codec Pack (1) computer (6) computer software (18) Computer ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်း (5) Desktop Virtuals Tools (1) Disk Defrag (1) dota (1) download tools (1) DVD Ripper (1) dvd tools (1) Ebook (12) Facebook (16) firmware (4) Folder Lock (1) Free Call & SMS (1) Games (5) gmail နဲ.ပက်သက်သမျှ (7) Google Chrome Shortcut Keys List (1) google earth (1) Google Hacking (1) Hacking (9) Hide Folder (1) History Eraser (1) Home (71) IDM (5) Internet Security (2) iOS နှင့်ဆိုင်သော (9) iOS7 Calculator For Android (1) ip hide (4) Jailbreak (3) K-Lite_Codec_Pack (1) Knowledge (44) linux (1) Malware (1) Mobile (29) music player (3) Office Tips (1) Partition Manager (1) pc tool (3) pc/laptop (1) photo viewer (1) Photoshop (3) PTC Site အသုံးပြုသူများ(အချိန်ပေးပြီးဖတ်ပေးပါ) (1) Recovery (2) samsung galaxy (4) samsung galaxy tabled (1) screen recorder (1) Security (6) skype (1) Software (34) speed up pc (4) Spyware (2) system (3) Trojan Remover (1) Typing (1) USB Guard (1) Usb-Memory (1) utilities (4) video edictor (2) Video Editing (1) virus နဲ.ပက်သက်သမျှ (5) web (1) website လမ်းညွှန် (1) wifi (5) window 8 (3) Window Tips (3) window နဲ့ပက်သက်သမျှ (2) Winrar (1) နည်းပညာ (6) ဗဟုသုတ (1) ဘလော့ဆိုင်ရာပိုစ်များ (1) မန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်လိုင်း တည်ဆောက်မှု ပြီးစီးဟုဆို (1)
ios 7.1.1 အတွက် Jailbreak နှင့် မြန်မာ ဖောင့် ကီးဘ...
ဖုန်းကနေ ဖတ်ရန် Apk
<<< ဖုန်းကနေဖတ်ရန် Apk ဖိုင် >>>
ကြိုက်ရင် LIKE ခဲ့ပါ...D
Software မျိုးစုံဒေါင်းရန်ဆိုဒ်များ Software များ ၁ Software များ ၂
မြန်မာရုပ်ရှင်ကြည့်ရန်ဆိုဒ်များ Burmeseclassic Shwevideos Shwedream Shweo
နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကြည့်ရန်ဆိုဒ်များ Solar movie Movie 4k မြန်မာစာတန်းထိုးနိုင်ငံခြားဇာတ်ကားများ Yangontharmovie Viooz Full HD Online Movies TUBE + TorrentButler Glow Gaze
mp3သီချင်းအတွက်ဆိုဒ်များ Myanmar Mp3 Album စည်း ဝါး Myanmar Online Music MYMClub
သူတို့ ဒါ တွေ ကိုကြည့်နေကြတယ်
Copyright @ 2013 MAUNG RUPER.
Designed by M@UNG RUP3R , င/ရမ